Beerlayda baradhada baakadeysan waxay ogaadeen in adeegsiga mashiinada kalasooca ay xalin karto dhibaatooyin badan - Nidaamka Baradhada
Maareynta khadadka baakidhka baradhada cusub waxay ku lug leedahay tixgelinta doorsoomayaal aad u tiro badan oo ay u egtahay dhaqdhaqaaq. Marka laga hadlayo cudurka faafa ee COVID-19, hawshani waxay noqotay mid sii murgsan. Wixii umuuqday wax aan macquul aheyn hada waa dhab oo taageero TOMRA Food... Mashiinnada kala-soocida indhaha TOMRA, oo si weyn loogu yaqaan saxsanaantooda sare iyo qaddarka yar ee qashinka cuntada, ayaa xallin kara hawlo kala duwan oo dhan, kuwaas oo tiradoodu ay kor u kacday oo keliya marka lala xiriirinayo COVID-19.
Maaddaama macaamiisha ay si ballaaran ugu beddeleen karinta guryaha, iibinta baradhada ayaa kordhay 30-40%. Laakiin dadaallada lagu doonayo in si dhakhso leh loo daboolo dalabkan waxay ku dhammaatay xaddidaadda khadadka baakadaha ee isticmaalaya kala soocidda gacanta. Ku darida tan waa dhibaatooyinka ay sababaan xaqiiqda ah in dadku aysan awood u lahayn inay si joogto ah u fuliyaan ficilada qaab feejignaan ugu badnaan ah. Mashiinnada kala soocista, markooda, waxay ku shaqeyn karaan awood buuxda saacad kasta iyada oo aan daal iyo diirada la saarin. Mashiinka kala-soocida indhaha TOMRA 5A wuxuu ka saarayaa khadka in ka badan 98% waxyaabaha aan loo baahnayn iyadoo wali la siinayo wax soo saarka ugu sareeya warshadaha.
Shaqaalaha: qorista iyo haynta
Xaaladda shaqaalaynta ee kala-soocidda gacanta ayaa waxaa uga sii daray xayiraadaha safarka ee la xiriira coronavirus iyo dillaac heer sare ah oo ka jira warshadaha cuntada. Mashiinnada ayaa si weyn hoos ugu dhigi kara heerka ku tiirsanaanta gacanta ee ganacsiyada kala-soocidda. Tani waxay u oggolaan doontaa loo-shaqeeyayaasha inay u wareejiyaan shaqaalaha meelaha khadadka baakadaha lagu rido halkaasoo kala fogaynta bulshada ay fududahay in la ilaaliyo.
Mid ka mid ah shirkadaha badan ee sida gaarka ah u qiimeeya ka faa'iideysiga isticmaalka mishiinnada ayaa ah Gumz Farms, oo ah soo saare iyo baakad ku saleysan Wisconsin, USA. Rod Gumz, milkiilaha meheradda, ayaa faallo ka bixiyay: “Nasiib wanaag, mashiinkeenna kala soocidda TOMRA wuxuu yareeyay tirada dadka looga baahan yahay kala saarida baradhada, wuxuu hubiyay kala fogaanshaha bulshada ee shaqaalaheena iyo kordhinta wax soo saarka wax soo saarka iyadoo la waafajinayo baahida loo qabo. ”
Tusaale kale oo wanaagsan waa shirkadda talyaaniga ah ee Ortofrutticola Parma, oo iyadu soo iibsatay mashiin cusub oo kala soocida oo loogu talagay khadadka barandhada lagu sameeyo bishii may ee sanadkan. Ivan Parma, Maamulaha Iibka ee shirkadda, ayaa isna la wadaagay dareenkiisa: "Waxtarka mashiinka ayaa naga caawiyey inaan dadka ka sii deyno shaqada aagga kala sooca oo aan u dirno meelaha kale, taas oo kor u qaadday wax soo saarka wax soo saarka oo dhan."
Awoodda in si dhakhso leh loo beddelo dejimaha xariiqda baakadaha baradhada iyadoo kuxiran qeexitaanka sheyga waa muhiimad weyn, maadaama ay yareynayso waqtiga dhimista. Dhawaan, ikhtiyaarkan ayaa xitaa noqday mid aad u khuseeya, maaddaama dukaamada tafaariiqda ay badiyaa beddelaan noocyada baradhada, kuwaas oo loo iibiyo "dalabyo xayeysiin ah." Marka, soo saaraha baradhada la baakadeeyey waxaa laga yaabaa in laga codsado galabnimada jimcaha inay soo helaan oo ay gaarsiiyaan bilawga usbuuca soo socda noocyo kala duwan oo baradho ah, cabir ahaan iyo tayo ahaanba si hufan loo qeexay, oo aan lahayn dhibco muuqda, oo lagu xirey jawaano culeys gaar ah leh. Runtii way adagtahay. Laakiin TOMRA 5A waxay ka caawin kartaa ganacsiyada baakadaha inay la kulmaan shuruudahan sida ugu saxsan iyo waqtiga ugu hooseeya ee waqtiga shaqada.
Wax soo saarkii ayaa kordhay
Waxsoosaarka sareeya iyo xawaaraha waxsoosaarka ugu badan ayaa door weyn maanta leh maadaama baahida loo qabo baradhada cusub ay si aad ah kor ugu kacday. Iyo, sida Olivier Vandaele, agaasimaha guud ee shirkadda Faransiiska ee Flandre Pomme de Terre uu ogaaday, ka dib markii uu soo iibsaday mashiin kala sooca TOMRA tikniyoolajiyaddani waxay "beddeli kartaa geedi socodka wax soo saarka." Markii ganacsiga baradhada ee qoysku leeyahay ee kobcaya iyo baakadeynta ay dejiyeen himilada hanka leh ee kordhinta wax soo saarka 30%, maamulku wuxuu ogaaday in adeegsiga mashiinka kala soocida ay tahay, sida uu qabo Olivier, “habka ugu wanaagsan ee lagu hubiyo sicirka kala-soocida saacadlaha ah iyadoo la yareynayo saameynta ururada, sidaas darteedna la kordhiyo waxqabadka dhamaadka xilli ciyaareedka isla markaana gaadho heerka koritaanka la doonayo. "
Faa'iidooyinka wax soo saarka waxaa sidoo kale horseed u ah faa'iidada oo kordhay iyo qashinka cuntada oo yaraaday. Tani waa maxay dejinta TOMRA 5A waxay qabataa shaqo aad u fiican: waxay kala soocdaa baradhada tayada-hooseysa si loogu iibiyo alaab heerkeedu hooseeyo. Ka sokow, TOMRA 5A waxay hagaajisaa wax soo saarka iyadoo la yareynayo ama la tirtirayo baahida loo qabo in la yareeyo xariiqda kormeerka gacanta, iyo iyadoo la yareeyo diidmada beenta ah, taasoo keentay wax soo saar badan oo soo saar ah.
Tayada tayada alaabta deggan
Marka la eego baahida sii kordheysa, beeraleyda baradhada baakadeysan waxay isku dayi karaan inay kordhiyaan xaddiga wax soo saarka khadka ama ay kordhiyaan xawaaraha howlgalkooda. Laakiin way sii adkaanaysaa in la xakameeyo tayada wax soo saarka, waana tayo muhiim u ah hubinta badbaadada cuntada ee macaamiisha, ilaalinta sumcadda soo-saareyaasha iyo buuxinta shuruudaha macaamiisha.
Faa'iidada sidoo kale waxaa saameyn ku yeelan kara awoodda baakadka si uu si sax ah u go'aamiyo tayada baradhada ay tahay inuu gaaro dhamaadka safka oo uu ku dhaco bacaha. In kasta oo badeecado tayo sare leh ay soo bandhigi karaan gelitaanka suuqyo soo jiidasho leh, haddana waxaa jira faa iidooyin muhiim ah oo laga helayo dib-u-kala-soocidda baradhada la tuuray oo lagu iibiyo fasallada hoose. Hadafkan waxaa la damaanad qaadayaa oo keliya marka la isticmaalayo qalabka kala-soocidda indhaha. Olivier Wandel oo ka tirsan Flandre Pomme de Terre ayaa yidhi: “Dufcad kasta oo ka mid ah badeecooyinka galaya kala-soocida, waxaan si fudud u dajinnay goobo mashiinnada kala-soocista ah si habka kala-soocidda loogu waafajiyo shuruudaha tayada ee ay dejiyeen macaamiisheena. Qeybaha wax soo saarka ee lagu helo mashiinka kala soocida indhaha TOMRAwaxaa lagu kala soocayaa sinaan la'aan gaar ah. "
Intaa waxaa dheer, kala soocida indhaha ayaa leh faa'iido kale oo wanaagsan. Sergio Pinho, maamulaha shirkadda reer Portugal ee Oliveira Pinho & Filhos, oo ku takhasustay soo saarista baradhada iyo basasha la baakadeeyay, ayaa yiri: “Mashiinka TOMRA wuxuu noo ogolaaday inaan horumarino tayada badeecada ugu dambeysa iyadoo kharash yar laga rabo shaqaalaha. Waxaan awoodnay inaan ku guuleysano qanacsanaanta macaamiisha, halka habka wax soo saarka ee warshadeenna uu si aad ah u soo hagaagay. ”
Qaar ka mid ah shirkadaha wax baakadeeya waxay doorbidaan alaab-qeybiyeyaashooda inay horay u nadiifiyaan baradhada. Tan "horay-u-kala-sooc", xirayaasha waxay kugula talin karaan mashiinka kala-sooca indhaha. TOMRA 3A... Waxay ku habboon tahay garashada iyo ka saarista walxaha shisheeye ee sida caadiga ah laga helo baradhada waaweyn ee imika la soo goostay sida jiirka berriga, dhalooyinka caagga ah, dhagaxyada, qoryaha, ulaha, jirridaha iyo canabka.
Shirkadaha baakadaha waaweyn ayaa laga yaabaa inay tixgeliyaan yareynta shaqada gacanta iyo baabi'inta baahida faragelinta aadanaha. Tan waxaa lagu samayn karaa iyadoo la buuxiyo mashiinnada kala-sooca. TOMRA Food sorter fara badan (MLS) laga bilaabo Compac, xubin ka tirsan kooxda shirkadaha TOMRA Food... Mid ka mid ah xalka hormuudka u ah warshadaha, MLS-ka Compac, wuxuu kala soocayaa khudaarta iyo miraha sida ugu macquulsan iyadoo loo eegayo miisaanka, cabirka, qaabka, midabka, dusha sare iyo tayada gudaha, wuxuuna caan ku yahay wax soo saarka jilicsan iyo soosaarida badan.
Tags: TOMRA Foodmakiinadaha kala soocabaradho baakadaysan